အလုပ်တူတူလုပ်ရင်း အပြင်မှာပါတကယ်ချစ်သူ ဖြစ်သွားကြတဲ့ တောင်ကိုရီယားစုံတွဲ (၅)တွဲ | Asia News Bar
အလုပ်တူတူလုပ်ရင်း အပြင်မှာပါတကယ်ချစ်သူ ဖြစ်သွားကြတဲ့ တောင်ကိုရီယားစုံတွဲ (၅)တွဲ
သရုပ်ဆောင်တွေဟာ ကိုယ်နဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ် တခါတလေ ချစ်ချင်ချစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်သဘောအရပက်သက်ရတယ်ပဲပြောပြော ခံစားချက်ဆိုတာဟာ တာဆီးလို့ မရနိုင်တဲ့အရာပါ။ အချိန်အကြာကြီး အတူတူအလုပ်လုပ်ရင်းနှင့်လည်း နှီးစပ်ကာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြမည့် အတွဲ(၅) တွဲကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးရင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြသည့် တောင်ကိုရီးယား မင်းသား၊မင်းသမီးများပင် ဖြစ်ပါတယ်။
၁. Song Hye Kyo and Lee Byung Hun
All in ဆိုသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးပီးမှာတော့ Lee Byun Hun နှင့် Song Hye Kyo တို့ဟာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပီလို့ ပရိတ်သတ်များကို အသိပေးခဲ့ပီး အဲ့နှစ်၏ မေလတွင်ပင် လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ Lee Byung Hun ကလက်ထပ်ချင်သော်လည်း Song Hye Kyo ကအဆင့်သင့်မဖြစ်သေခဲ့တာကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
၂.Song Hye Kyo and Hyun Bin
သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော the world we live in ဆိုသည့် ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးရင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်တော့ Hyun Bin ကလည်းစစ်ထဲ ဝင်ရမည့်အပြင် များပြားလှသော အလုပ်တာဝန်များကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။
၃.Rain and Kim Tae Hee
၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် Rain နှင့် Kim Tae Hee တို့ဟာ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တူတူရိုက်ကူးရင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးတွဲနေပီဆိုတာကိုတော့ ကနဦးစတွင် လျိုဝှက်ထားခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်တော့ သူတို့၏အေဂျင်စီများက မင်းသားနှင့်မင်းသမီးဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်းကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁ရခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်တော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လက်ထပ်ခဲ့ပီး ယခုဆိုလျှင်တော့ ကလေးနှစ်ယောက် ရှိနေပီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။Lee Sung Kyung and Nan Joo Hyuk
နောက်ထပ် နာမည်ကြီးတဲ့ couple ကတော့ Lee Sung Kyung နှင့် Nan Joo Hyuk တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ weightlifting fairy Kim Bok Joo ရိုက်ကူးရင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် သိပ်မကြာခင်မှာတော့ များပြားလှသော အလုပ်တာဝန်များကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချိန်မပေးနိုင်သောကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
၅။ Gu Hye Sun and Ahn Jae Hyun
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော Blood ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် တူတူသရုပ်ဆောင်ပီး ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူအများက အားကျရလောက်သော စံပြအတွဲတစ်တွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပီး ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်တော့ တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခဲ့ကြပါတယ်။
Next Baeksang ဆုပေးပွဲရဲ့ Best Leading Actor Award အတွက် စံကာတင်မင်းသား (၅) ဦး »
Previous « မန်နေဂျာဟောင်းဆီက ကိုရီးယားဝမ် တစ်ဘီလီယံခန့် လိမ်လည်ခံခဲ့ရတဲ့ Lisa
EXO Concert ပွဲထိ သွားရောက်အားပေးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ ပါးချိုင့်လေး နဲ့ D.O. ကြားကိုရင်းနှီးမှု
အကောင်းမွန်ဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များ
ဇာတ်လမ်းတွဲများထဲတွင် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးရလောက်အောင်ပင် ခန့်ငြားသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသား (၁၀) ဦး
Nation’s Title ရရှိထားကြတဲ့ နာမည်ကျော် ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ (အပိုင်း ၁)